Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /customers/0/9/6/barqamaal.com/httpd.www/wp-includes/compat.php on line 502 SOMALI-NEWS – Page 4 – Barqamaal
NEW VIDEO DHAANTO iNC VIDEO CUSUB MAJAJILO HARTI IYO OGADEN
(Daawo)Madaxda Puntland iyo Federaalka oo dhagaxdhigay dhismaha ispitaalka Galkacyo.
https://www.facebook.com/Bkayle/videos/1186569578077335/ (Daawo)Madaxda Puntland iyo Federaalka oo dhagaxdhigay dhismaha ispitaalka Galkacyo. Madaxwaynaha Puntland iyo ku xigeenkiisa oo uu wehliyo Gudomiye xigeenka barlamanka Federaalka ayaa maantay dhagaxdhigay dhismaha cusub ee isbitaalka Galkacyo. Madaxda ayaa dhamaantood baaq u wada diray shacab waynaha somaliyeed dal iyo Dib ad.
GARAAD CABDISALAAN : WARAYSI BBC ARINTA KHAATUMO IYO SOMALILAND
Car bal iidoor waxay ugu galeen yaa nagaransiiya
Abwaan Helaale Gudgude Cismaan Garaad Soofe Oo Tuulada Caroweyn Ku Urursaday Maleeshiyaad Dulaan Ku Ah Buuhoodle
Golaha Wasiirada Khaatumo Xubnaha Baarlamaanka Khaatumo
Jaaliyada Wadaagsin ee saldhigeedu yahay magaalada Gothenburg ayaa booqasho ugu tagtay Fiqi Bashir Cabdulle oo ku xanuunsan magaalada Stockholm.
Fiqi bashir oo hadal kooban u jeediyey waftigii jaaliyada ayaa alle uga baryey in Soomaalidu nabad hesho, wixii dhibaato ah oo dhexyaalana alle u sahlo iney xaliyaan. Inkasta oo Fiqi Bashir xanuun hayey hadana waxaa wajigiisa ka muuqday nuur fiican. Waxaan allihii waynaa uga baryeynaa inuu Fiqi Bashir caafimaad deg-deg…
Prof Abdiweli Mohamed Ali Gaas “Arin waa mid kugu soo boodiyo mid kugu bariday.
Prof Abdiweli Mohamed Ali Gaas iyo tilaabadi uu qaaday markii uu galkacyo yimid waxay igu noqotay arin igu soo booday. waxay igu noqotay arin aan filan waayey. waxaan isiri laba arimood arintu tee tahay. madaxwaynaha waa la khalday oo arinta Galkacyo ka dhacday waa mid loo hoos galiyey amase madaxwaynuhu…
Madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiwali Maxamed Ali Gaas ayaa kulan adag oo xasaasi ah la yeeshay qeybaha bulshada ee gobalka Mudug
GAALKACYO(PTIMES)- Madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiwali Maxamed Ali Gaas ayaa kulan adag oo xasaasi ah la yeeshay qeybaha bulshada ee gobalka Mudug, gaar ahaana magaalada Gaalkacyo waxaana si adag looga wada hadlay xaaladda amniga ee magaalada. Waxgaradkii hadlay ee gobalka Mudug waxay si cad u sheegeen in Galmudug ay ka dambeyso…
Xafladii qalin jabinta gabdhaha Al hussein ee magaalada Gothenburg, Sweden
Xafladii qalin jabinta gabdhaha Al hussein